Ithegi: ukumakisha | Martech Zone
Uyilungiselela njani iNqaku elilandelayo leBhlog yakho kwiMpembelelo ePhezulu.
NgoLwesihlanu, Februwari 22, 2019 NgeCawa, ngoMatshi 7, 2021 Douglas Karr
Esinye sezizathu zokuba ndibhale incwadi yam yokubloga ebumbeneyo kwiminyaka elishumi eyadlulayo yayikukunceda abaphulaphuli bafumane ibhlogi yokubhengezwa kwintengiso yeinjini yokukhangela. Uphendlo alufani nolunye uhlobo kuba umsebenzisi wokukhangela ubonakalisa injongo njengoko befuna ulwazi okanye benza uphando ngokuthenga kwabo okulandelayo. Ukulungiselela ibhlog kunye nomxholo kwisithuba ngasinye akukho lula njengokuphosa nje amagama athile kumxube… zininzi kakhulu
Ingxaki ngeWebhu 3.0 iyaqhubeka
NgoMvulo, Juni 18, 2018 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 23, 2021 Douglas Karr
Ukwahlulahlula ngokwamacandelo, ukuhluza, ukumakisha, ukuqokelela, ukubuza imibuzo, ukwenza isalathiso, ukuhlela, ukufomatha, ukuqaqambisa, ukunxibelelana, ukulandela, ukudibanisa, ukuthanda, ukuthumela i-tweeting, ukukhangela, ukwabelana, ukubeka amanqaku, ukumba, ukukhubeka, ukuhlela, ukudibanisa, ukulandela umkhondo, ukwaba… kubuhlungu. Ukuvela kweWebhu yeWebhu: Ngo-0 uTim Berners-Lee we-CERN ucebisa ukuba i-Intanethi ivuleke. Iwebhusayithi yokuqala ivela ngo-1989 ngeProjekthi yeWebhu yeWebhu yeHlabathi. IWebhu ye-1991: Ngo-1.0 kukho iiwebhusayithi ezingama-1999 ezigidi kunye nabasebenzisi abahamba ngokukodwa ngokusetyenziswa kwegama-ngomlomo kunye neenkcukacha ezifana ne-Yahoo! Web
Ezona ndawo ziDumileyo neziDingekayo zokuThengisa kwi-Ecommerce
NgeCawa, Oktobha 22, 2017 NgeCawa, Oktobha 22, 2017 Douglas Karr
Ukuze usebenzise, ​​ulinganise, kwaye ulungiselele naluphi na utshintsho ukuphucula iziphumo zakho ze-ecommerce, ukufaka idatha ehambelana nayo yonke umsebenzisi kunye nesenzo kubalulekile. Awunakuphucula into ongayilinganisiyo. Okubi kakhulu, ukuba uthintela into oyilinganisayo, unokwenza izigqibo ezonakalisa intengiso yakho kwi-Intanethi. NjengoSoftcrylic, umthengisi-ongathathi hlangothi weDatha kunye nomdlali we-Analytics uthi, ulawulo lwethegi lusebenza kwiNtengiso yeDijithali ngolwazi oluphambili ekulandeleleni iindwendwe, ukujolisa ekuziphatheni, ukumaketha kwakhona, ukwenza umntu kunye nokuqinisekiswa kwedatha.
I-BrightTag: Iplatifomu yoLawulo lweeThegi
Lwesine, Okthobha 31, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Imicimbi emibini abathengisi beshishini bahlala besilwa kwi-Intanethi banesakhono sokunciphisa amaxesha okulayisha indawo yabo KANYE nokukwazi ukuthumela ngokukhawuleza ukhetho olongezelelekileyo lokumakisha kwiipropathi zabo zewebhu. Umbutho oqhelekileyo weshishini unokuba neshedyuli yokuhanjiswa ethatha iiveki okanye iinyanga ukufumana utshintsho kwisiza. Omnye wabathengi bethu beshishini uhlanganise ulawulo lwethegi yeshishini kwiBrightTag kwindawo yabo eneziphumo ezintle. Indawo yabo yayiqhuba uhlalutyo oluninzi